Shikhar Post » नाट्टा अध्यक्षका प्रत्यासी दिपेन्द्र कुमार शर्मालाई शिखरपोष्टको पाँच प्रश्न ?
बाहिरै बस्न तयार थिए, तर राजनीतिक भागबण्डाबाट उत्पन्न गलत नियत चिर्न उम्मेद्धार बनेको हुँ
दिपेन्द्र कुमार शर्मा आउँदो पौष २८ गते काठमाडौंमा हुन लागेको नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा) निर्वाचनका लागि अध्यक्षका उम्मेद्धार हुन् । विगत लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रसँग उठबस गर्दै आएका शर्मा सन् २००२ देखि नाट्टामा आवद्ध छन् । डिके टूर्स एन्ड ट्राभलका संचालक शर्मासमेत रहेका शर्मा सन् २०१० देखि २०१४ सम्म दुई कार्यकाल कार्यसमिति सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । वर्तमान कार्यसमिति (सन् २०१६ देखि २०१८)को द्वितीय उपाध्यक्षको रुपमा जिम्मेवारी बहन गरिरहेका उनै शर्मालाई सोधिएको पाँच प्रश्न:
तपाई खास किन चुनावमा उठ्दै हुनुहुन्छ ?
नाट्टाको आगामी निर्वाचनका लागि यता सहमति हुँदैछ, उत्ता सहमति हुँदैछ भन्दै टाने काम गरियो । सहमतिको नाममा नाट्टाका वर्तमान कार्यसमितिलाई गुमराहमा राखेर सहमति भइरहेको छ भनियो । जबकी त्यो कुरा हामीलाई थाहै छैन । कस्तो सहमति ? कहाँ कसरी भएको सहमति ? हामीलाई थाहै नदिइकन अन्तिममा सहमतिको नाममा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा पहुँचवालाहरुलाई समेटेर छुट्टै टिम घोषणा गरियो । वर्तमान कार्यसमितिको सबैलाई बाइपास गरेर राजनीतिक भागबण्डा गर्दै सहमति भन्न थालिएपछि हामीले छुट्टै टिम बनाउनु परेको हो । नाट्टामा गैरराजनीतिक र व्यवसायिक नेतृत्वको खाँचो छ । त्यो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हामी चुनावी मैदानमा उत्रिएका हौं ।
सहमतीय नेतृत्वको विषयमा विमति चाही किन ?
हामी सहमतिको आधारमा नाट्टामा नयाँ नेतृत्व चयन गरौं भन्ने कुरा पक्षमा हो । यस पटक म सहमति गर्न तयार थिए । म बाहिर बस्न पनि तयार थिए । तर, यहाँभित्र विभिन्न खालका खेल भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिन बाध्य बनायो । गलत नियतका साथ कार्यसमितिभित्र खेल्ने जो काम भयो, त्यसलाई चिर्नका लागि हामीले विसुद्ध व्यवसायीहरुको टिम बनाएर अघि बढाएका हौं । नाट्टा एउटा विसुद्ध व्यवसायीहरुको हकहितका लागि स्थापित संस्था हो । तर यहाँ राजनीतिक भागबण्डा भयो । राजनीतिक व्यक्तिलाई जबरजस्त रुपमा उभ्याउने काम गरियो । सिधै भन्दा यसपालीको चुनावमा बाम गठबन्धन, लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्दै राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा टिम बन्यो । त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति हो । नाट्टाको साख गिर्न नदिनका निम्ति हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौं । नाट्टामात्रै होइन सिंगो पर्यटन क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो ।
भनेपछि तपाई र तपाईको प्यानल कुनै पनि राजनीतिक दलसँग नजिक छैन ?
यहाँ पार्टीको झण्डा बोकेर संस्थाको नेतृत्व गर्न जाने संस्कार मौलाउँदै गइरहेको छ । यो गलत हो । अव पनि हामी चुप बस्यौ भने राजनीतिकरण अझ बढ्छ । त्यसको अन्त्यका लागि पनि मेरो समुहको नेतृत्व नाट्टामा जान जरुरी थियो । हामीमा कुनै स्वार्थ छैन । स्वभाविक रुपमा हामी पनि कुनै न कुनै दलसँग निकट छौं, तर यसरी संस्थाको नेतृत्वका लागि सिधै पार्टी पार्टीको कोटा तोकेरै आउने संस्कारको विरुद्ध हामी छौं । संस्थाभन्दा बाहिर बस्दा त आआफ्नो आस्था विचार छदैछ, तर संस्थामा आउँदा त्यहाँ कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट लाइन हो ।
तपाईको जित्ने आधार बताइदिनुस् त ?
नाट्टाले सुरुवात गरेका कामहरुलाई पूर्णता दिनका लागि आएटा, कर, भ्याट लगायत व्यवसायिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा लागि पर्ने हाम्रो मुलभुत एजेण्डा हो । त्यसको अलावा व्यवसायीहरुको हकहित तथा नाट्टाको संस्थागत विकासका एजेण्डाहरु हामीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा पनि उल्लेख गरेका छौं । अर्को हाम्रो जित्ने आधार भनेको मेरो नेतृत्वको टिम विसुद्ध व्यवसायिक र समावेशी टिम हो । हामीले क्षेत्रगत रुपमा हिमालदेखि तराई सबैलाई समेटेका छौं त्यस्तै महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । यो टिममा सबै विधा जस्तो टिकेटिङ, टुर, ट्राभल सबै क्षेत्रमा सफल र अनुभवी व्यवसायीहरु समेटिएको छ । यीनै हुन् हाम्रो जित्ने आधार ।
कति मत ल्याएर जित्ने अनुमान तपाईको छ ?
म सन् २०१० देखि ०१४ सम्म कार्यकारी सदस्य रहेर काम गरे । २ साल बाहिर बसेर नाट्टालाई नजिकबाट नियाले र दुई सालपछि व्यवसायीहरुकै मागअनुसार पुनः म द्धितीय उपाध्यक्षमा अत्याधिक मतका साथ जिते । यस पटक नाट्टाको जम्मा मतदाता सदस्य संख्या ४६७ हो जसमा ४५० मत खस्ने अनुमान गरेका छौं । त्यत्ति मत खस्दा हामीले २५० मतभन्दा माथि मत ल्याएर पुरै प्यानल जित्छौं ।